Maitiro ekuti utarise zvinyorwa muIOS 11 pamwe neApplication application | IPhone nhau
Ignatius Room | | iOS 11, Zvidzidzo uye zvinyorwa
MuApp Store tinokwanisa kuwana huwandu hukuru hwezvishandiso zvinotibvumidza kuti titarise magwaro kuti gare gare tishandure kuita fomati yePDF kuti tiagovane nemamwe maapplication kana neemail kana zvimwe zvinoshandiswa zvekutumira mameseji. Mumakore achangopfuura, iyo App yeNote yakagamuchira nhamba hombe yezvinhu zvitsva Uye nekuburitswa kweIOS 11, mabasa ayo aanotipa isu natively anoramba achiwedzera. Chimwe chinonyanya kushamisa mukana wekugona kuverenga magwaro zvakananga kubva kuchikumbiro chemuno, pasina kuita kune vechitatu-bato kunyorera.
Kutenda kumabasa matsva akagashirwa manyorerwo mushanduro dzeIOS dzichangoburwa, maNotes ave chikumbiro chinotibvumidza kwete kungogadzira zvinyorwa chete, kunyora manotsi, kuteedzera zvinongedzo ... asiwo inotibvumidza kuti tive nemagwaro atino scan munzvimbo imwechete nekuti isu tinofanirwa kuva navo paruoko. Heano mashandiro anoita ino nyowani manotsi maficha, chinhu chinenge chichiwanikwa kana Apple yaburitsa yekupedzisira vhezheni yeIOS 11 munaGunyana.
Skena magwaro muIOS 11 neApp Notes
Kutanga isu tinofanirwa kuvhura iyo manyorerwo application.
Tevere, tinya pane iyo icon kuti ugadzire nyowani nyowani, iri mukona yezasi yekurudyi.
Iye zvino isu tinongofanirwa kudzvanya + icon uye sarudza Scan magwaro.
Iyo kamera ichatanga, tinya pane bhatani kuti ubate.
Padanho rinotevera tinofanirwa kugadzirisa mativi egwaro kuti iOS ikwanise kutora chete gwaro kubva mukutora, kubvisa chero chikamu chisingaenderane nacho, senge tafura yakatorwa kubatwa.
Kana maganhu achinge asarudzwa, tinya paShandisa yakaverengwa faira uye iko kunyorera kuchatibvumidza kuenderera tichiongorora magwaro. Kana isu tisingade kuenderera, isu tinongofanirwa tinya paSave uye magwaro anozoratidzwa mukati meye nyowani nyowani yatakagadzira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Maitiro ekuti utarise zvinyorwa muIOS 11 neApple app
uye ndeupi musiyano nekutora pikicha nekucheka micheto kazhinji, ine mhando yepamusoro, kuzivikanwa kweOCR?
Yakanaka chinyorwa, maita basa, yakandichengetera nguva yakawanda nemari.
Nekudaro chero gwaro rinotora anenge gumi nemaviri megabyte. Dzimwe nguva hazvigoneke kushandisa nekuda kwehukuru hwayo hukuru. Bravo!
LastLocked inotiratidza iyo nguva yakapfuura kubvira iyo iPhone yakapedzisira kuvhurwa